Abomacetin (အဘိုမစီတင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Abomacetin (အဘိုမစီတင်)
Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Abomacetin (အဘိုမစီတင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Abomacetin ဟာ erythromycin နဲ့ ကုသနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေ (ဥပမာ ဆုံဆို့နာ၊ကြက်ညှာ၊မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ၊ တိရ စ္ဆာန်မှတဆင့် လူသို့ကူးစက်သော ဘရူဆယ်လိုးစစ် ရောဂါ၊Legionnaires အမည်ရှိ ရောဂါတမျိုး၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊နားပြည်ယိုခြင်း၊သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း၊နမိုးနီးယား အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ၊ကာလသားရောဂါ စသည်) ကို ကုသဖို့အတွက် အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပင်နီဆလင်၊tetracycline၊chloramphenicol၊ streptomycin စတဲ့ ဆေးတွေမတိုးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ (ဥပမာ staphylococci)ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကုသဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ ဝက်ခြံရောဂါအတွက် အရေပြားလိမ်းဆေးအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊
မျက်လုံးတွင်း ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် မျက်စဉ်းဆေးအဖြစ်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
erythromycin ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျ သောက်ရပါမယ်။ ဆေးညွှန်းမှာပါဝင်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်း လိုက်နာရပါမယ်။ အာနိသင်အကောင်းဆုံးရရှိစေဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏကို အခါအားလျော်စွာ လိုအပ်သလို ချိန်ဆပေးပါလိမ့်မယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထက် ပိုသောက်ခြင်း၊လျှော့သောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ညွှန်ကြားထားတဲ့ ကာလထက် ပိုသောက်ခြင်း စတာတွေကို မပြုလုပ်ရပါဘူး။ တကယ်လို့ ဒီဆေးကို ကလေးတွေမှာ အသုံးပြုတယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိသော် ဆရာဝန်ကို အသိပေးရပါမယ်။Erythromycin ဆေးပမာဏဟာ ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ကြာရှည်စွာ အာနိသင်ပြတဲ့ ဆေးတောင့် ဒါမှမဟုတ် ဆေးပြားတွေကို ဝါးစားခြင်း၊ချိုးပစ်ခြင်း စတာတွေကို မပြုလုပ်ဘဲ တခါတည်း မြိုချရပါမယ်။
ဆေးရည်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဆေးပုလင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ ဆေးထိုးပြွန်၊ချင်တွယ်ခွက်၊ဇွန်း စတာတွေကို အသုံးပြုပြီး ဆေးပမာဏကို တိကျစွာ တိုင်းတာရပါမယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ ချင်တွယ်စရာ ပစ္စည်းကိရိယာမရှိဖူးဆိုရင် ဆေးဆိုင်ကနေ တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ကာလအတိုင်း ဆေးပတ်လည်အောင် သောက်ပါ။ ရောဂါရာနှုန်းပြည့်မပျောက်ကင်းခင်မှာ သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေ သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဆေးသောက်ရပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဆေးယဉ်ပါးမှု ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေ (သာမန်အအေးမိခြင်း၊တုပ်ကွေးဖျားခြင်း စသည်)ကိုတော့ Erythromycin က မကုသပေးနိုင်ပါဘူး။
Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Abomacetin ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Abomacetin ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Abomacetin ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Abomacetin ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Abomacetin ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
ဆေးရည်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမှာဖြစ်ပြီး ဆေးဗူးမှာပါတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာ သိမ်းဆည်းရမှာပါ။ ဆေးရည်တွေဟာ ကာလတိုအတွင်းမှာ ရက်လွန်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ အသုံးမပြုလိုက်ရဘဲ ရက်လွန်သွားတဲ့ ဆေးရည်တွေကို ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။
Abomacetin (အဘိုမစီတင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးကို မသုံးစွဲခင် အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
Abomacetin ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
macrolides အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းကို ကုသဖို့ ဆေးဝါးတွေ မှီဝဲနေရခြင်း။
အစာအိမ်အချဉ်ဓါတ်ကို များစေတဲ့ ဆေးတွေ ဒါမှမဟုတ် အက်ဆစ်ဓါတ်ကဲတဲ့ အဖျော်ယမကာတွေဟာ erythromycin ရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
erythromycin ကို နို့ ဒါမှမဟုတ် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး မသုံးစွဲရပါဘူး။
erythromycin ပါဝင်တဲ့ ဆေးကို အကြောထိုးဆေးအဖြစ် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေမှာ Gaspinga လို့ခေါ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်အထိရှိနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပေါင်းစုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြင် အသည်းရောင်ခြင်းလည်း အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
erythromycin ဟာ အချို့သော ဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရဲ့ ရလာဒ်ကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကို ကုသပေးတဲ့ ဘယ်ဆရာဝန်ကိုမဆို သင့်အနေနဲ့ erythromycin သုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အစားအသောက်ပျက်ခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
erythromycin နဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ခံယူပါ။
မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်းများ ရောင်ရမ်းခြင်း။
အောက်ပါ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရရင် ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါ။
ဝမ်းလျှောခြင်း (အရည်များ သို့မဟုတ် သွေးဝမ်းသွားခြင်း)။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊အလွန်အမင်း ငိုက်မျဉ်းထိုင်းမှိုင်းလေးလံခြင်း။
ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ရင်ဝအောက်နား၌ နာကျင်ခြင်း၊အောင့်ခြင်း၊ယားယံခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ဆီးအရောင်မည်းခြင်း၊ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊အသားဝါခြင်း၊မျက်ဖြုသားဝါခြင်း အစရှိတဲ့ အသည်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ။
ပြင်းထန်သော အရေပြားတုံ့ပြန်မှုများ (ဥပမာ ဖျားနာခြင်း၊လည်ချောင်းနာခြင်း၊မျက်နှာ သို့မဟုတ် လျှာတို့ဖောင်းကားရောင်ရမ်းခြင်း၊မျက်စိပူစပ်စပ်ဖြစ်ခြင်း၊အရေပြားနာခြင်း၊ထို့နောက် မျက်နှာနှင့် ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတို့တွင် အနီစက်၊ခရမ်းရောင်အစက်များ ထွက်လာပြီး ပျံ့နှံ့သွားခြင်း၊အရည်ကြည်ဖုများထခြင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ အရည်ကြည်ဖုများ ပေါက်ပြဲကွာကျခြင်း စသည်)။
erythromycin ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို အသက်ကြီးသူတွေ ပိုမိုခံစားရနိုင်ပါတယ် (ဥပမာ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊အသက်အန္တရာယ်ရှိလောက်သည်အထိ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း)။
ဘယ်ဆေးတွေက Abomacetin (အဘိုမစီတင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Abomacetin ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Abomacetin (အဘိုမစီတင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Abomacetin က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Abomacetin (အဘိုမစီတင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Abomacetin ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အောက်ပါရောဂါတွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။
အသည်း သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ရောဂါ။
ခန္ဓါကိုယ်တွင်း ဓါတ်ဆားပမာဏ မညီမျှခြင်း (သွေးတွင်း ပိုတက်ဆီယမ်၊မဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏ စသည်တို့ နည်းပါးခြင်း)။
အီးစီဂျီ ဆွဲသောအခါ long QT syndrome ဟုခေါ်သော မူမမှန်အနေအထားရှိဖူးခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့နေရာ၊ပြင်းထန်မှု၊ဘက်တီးရီးယားရဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု စတာတွေပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆေးပမာဏကတော့
တနေ့ကို ၁ – ၄ မီလီဂရမ် ပမာဏကို လေးကြိမ်ခွဲသောက်ရပါမယ်။
ဆေးသောက်ရမယ့် ကာလက ၅ – ၁၄ ရက်ဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားရင်တောင် နောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက် ဆေးကို ဆက်သောက်ရပါဦးမယ်။
အစာမစားခင် တနာရီလောက်ကြိုသောက်နိုင်သလို အစာစားပြီး နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်အကြာမှာလည်း သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးရည်ကို ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ နေရာပေါ်လိမ်းပေးနိုင်ပြီး မျက်စိကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် အောက်မျက်ခမ်းအနောက်ဖက်ကို ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏ၊သုံးစွဲရမယ့် အကြိမ်ရေနဲ့ ကာလ စတာတွေက တဦးနဲ့တဦးတူညီမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်သုံးနှစ်အောက်ကလေးများအတွက် : တနေ့ကို 20-40 mg / kg ပမာဏ ၊အသက် လေးလမှ အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်အထိ ကလေးများအတွက် : တနေ့ကို 30-50 mg / kg ပမာဏ သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပြီး တနေ့ကို လေးကြိမ်ခွဲသောက်နိုင်ပါတယ်။
Abomacetin (အဘိုမစီတင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Abomacetin ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Abomacetin ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Abomacetin® (erythromycin) Drug Information,
http://www.catalog.md/drugs/Abomacetin.html Accessed November 26, 2016
ABOMACETIN® (ERYTHROMYCIN) USES,
http://www.ndrugs.com/?s=Abomacetin. Accessed November 26, 2016
Erythromycin, https://www.drugs.com/erythromycin.html Accessed November 26,